Fonjan’Antanimora : Miisa 3500 ireo voafonja -
AccueilRaharaham-pirenenaFonjan’Antanimora : Miisa 3500 ireo voafonja
Hatramin’ny nanorenana ny fonjan’ Antanimora ny taona 1896, dia mbola tsy nisy ny fanavaozana na fanatsarana natao tao an-toerana ka miteraka olana amin’ny fandraisana ireo voafonja. Raha voafonja 800 isa ihany no zakan’ny fonja tany ampiandohana, ankehitriny efa tafakatra 3 500 eo ho eo no miara-miaina ao. Ny 60 isan-jaton’ireo anefa mbola miandry fitsarana avokoa, izay manodidina ny 2 100 eo raha ny tatitra avy amin’ny lehiben’ny fonjan’Antanimora, Rakotonanahary Tahina. Ao anatin’ireo moa dia misy ihany koa ireo voatana am-ponja vonjimaika miandry ny didim-pitsarana. Fa misy indray ireo efa nivoaka didy fa nanao “appel” na “cassation”. Ny fahanteran’ny fotodrafitrasa, sy ny tsy fisian’ny fanitarana azy hatramin’izay, ary ny fitomboan’ireo olona voaheloka alefan’ny Fitsarana eny amin’ny fonjan’Antanimora, izay no mahatonga ny fihoaran’isa ao amin’ity fonja ity, hoy ny fanazavan’ny lehiben’ny fonja hatrany, satria lasa mihoatra lavitra ny tokony ho zakany no isan’ireo voafonja.
“Ny fahamaroan’ny isan’ny voafonja mazava ho azy no antony satria tsy maharaka azy ireo ny fotodrafitrasa. Marihina fa ny fonjaben’Antanimora dia efa ny taona 1896 no niorina, ary olona 800 ihany no zakan’ny fonja tamin’izany. Araka izany dia ny fitomboan’ny mponina no isan’ny mahabetsaka ireo voafonja. Misy taha iraisam-pirenena ny isan’ny mponina sy ny voafonja ary 1 isan-jaton’ ny mponina foana no voafonja. Raha vao mitombo ny mponina dia mitombo manaraka izay ihany koa ny voafonja. Ny vahaolana dia manangana fonja vaovao”, hoy i Rakotonanahary Tahina, lehiben’ny fonjan’Antanimora.
Fantatra fa tokony ho voafonja 30 voatana ao an-toerana no hotsaraina isam-bolana. Efa misy hatrany moa ny tatitra ataon’ny Fitsarana amin’ireo olona tapitra 5 taona mijanona ao amin’ny fonjan’Antanimora ka tokony hamoahana didy. Araka izany, dia tsy voahaja ny zon’ireo voafonja ireo satria na ny toerana hatoriana aza tsy mihoatra ny 1 metatra toradroa raha toa ka 3 metatra toradroa ny fenitra ara-dalàna, raha ny fanazavana voaray hatrany. Betsaka anefa ny olana aterak’izay. Tafiditra amin’izany ny aretin-tsaina, ary betsaka ireo efa very saina rehefa ao anatin’ilay fonja satria na ny daty naterahana, ny anarana tsy hainy intsony. Olana hafa ihany koa ny tsy fahampian’ny olona miandry ireo voafonja. Marihina anefa fa tsy ny fonjan’Antanimora ihany no voakasik’io fa saika ny fonja rehetra manerana ny Nosy. Saingy ny ao Antanimora izay no tena voakasika indrindra, noho izy, mandray na vehivavy, na lehilahy, eo ihany koa ny tsy ampy taona na ampy taona. Misy araka izany ny fepetra tokony hapetraka.
Mipariaka eny amin’ny tambazotra FB indray amin’izao fotoana izao ny famoronana resaka nolazaina fa nifanaovan’ny PDG n’ny RLM Communication tamina olona tamin’irony antsoina hoe “MP” irony. Raha jerena maimaika aloha ilay izy dia toa ireny ...Tohiny